Maanta oo kale 76 sannadood ka hor, waxay ahayd markii labaad ee dhulka Somaliland lagu soo weeraro diyaarado iyo hub casri ah! |
Maanta oo kale 76 sannadood ka hor, waxay ahayd markii labaad ee dhulka Somaliland lagu soo weeraro diyaarado iyo hub casri ah!
w16-kii bishii August ee sannadkii 1940-kii waa markii koowaad ee ay Fashiisatadii Talyaaniga ka arrimin jirtay ay si buuxda gacanta ugu dhigtay dhulkan Somaliland, isla markaana ay xoog kagala wareegtay dawladdii xilligaas ka talinaysay ee Biritishka.
Waxay ahayd subax Isniineed, taariikhduna ay ahayd 6.August.1940-kii, markii ay laba diyaaradood oo uu Talyaanigu lahaa ka soo duuleen magaalada Jig-jiga ee maanta ka tirsan dhulka Dawlad deegaanka Soomaalida, waxaanay labadaas diyaaradood duqayn ba’an u geysteen magaalada Hargeysa oo wakhtigaas iska koobnayd. Waxay ahayd taariikhda markii koowaad ee magaalada Hargeysa lagu soo weerero diyaarad iyo hub casri ah. Kadib markii si waxshinimo ah ay diyaaradahaasi u duqeeyeen magaalada Hargeysa, ayaa waxaa magaalada ku soo qul-qulay ciidan Talyaanigu uu watay oo iskugu jiray Xabashi, Soomaali laga keenay koonfur iyo weliba qaar Taliyaani ah. Dadkii xilligaas Hargeysa ku noolaa waxa ay u kala qaxeen laba goobood oo kala ahaa Daloodho (oo immika ah xaafad Hargeysa ka mid ah) oo ay u qaxeen dadkii Woqooyiga magaalada deganaa iyo tuulada Halleeya oo ay u qaxeen dadkii Koonfurta magaalada deganaa. Maalin kadib ayaana lagu soo noqday magaalada Hargeysa, maadaama oo dagaalkii uu Hargeysa dhaafay, waxaanay noqotay taariikhda markii koowaad ee Hargeysa dagaal looga qaxo!
Kadib markii ay ciidamadii Talyaanigu la wareegeen magaalada Hargeysa, waxa ay u ruqaansadeen dhinaca Bariga magaalada Hargeysa, halkaasi oo ay ku taallay xarunta ugu weyn ee uu Ingiriisku fadhiyi jiray xilligaas oo ahayd Berbera. Wakhti dheer kumay qaadan Taliyaanigu inuu magaalada Berberana la wareego. Toban cisho kadib markii uu Taliyaanigu magaalada Hargeysa qabsaday oo ku beegnayd 16.August.1940-kii ayuu magaalada Berberena la wareegay, taasina waxay soo af-jartay taliskii Ingiriisku uu ka talinayey dhulkan Somaliland, waxaana si rasmi ah uu dhulkii Somaliland ugu dhacay gacanta Faashiistihii Taliyaaniga ee uu caynaanka u hayey Kaligii-taliyihii Mussolini.
Bilowgii sannadkii 1941-kii ayaa xulafadii Maraykanka iyo Ingiriiska oo ay dagaal adag kula jiray Faashiisatadii Taliyaanigu ay dhulka Soomaalida ka soo galeen dhinaca waddanka Kiiniya si ay Taliyaaniga ugala wareegaan gebi ahaanba dhulka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, diyaarada Ingiriisku waxa ay ka soo duulayeen sal-dhigyadii uu Ingiriisku ku lahaa magaalada Cadan ee dalka Yemen, waxaanay duqaynayeen xaryihii millatari ee uu Taliyaanigu ku lahaa dhulkan Somaliland iyaga oo aan u aabbo-yeelayn dad iyo xoolo wixii ku sugnaa dhulkaas ay duqaynayeen. Loollan adag oo labada gumeyste ku dhex-maray dhulkan Somaliland kadib, ugu dambayntii waxa si buuxda dhulka Soomaalida loogala wareegay Faashiisatadii Taliyaaniga, waxaana gebi ahaanba dhulkii Soomaaliyeed gacanta ku dhigay Ingiriis taariikhdu markii ay ahayd 16.Maarj.1941-kii. Kaliya Ingiriisku xilligaas Jabuuti ayuun baanu xukumayn dhulka Soomaaliyeed oo dhan, balse inta kale isaga ayaa ka talinayey, Jabuutina xilligaas waxa haystay dawladda Faransiiska oo ay xulafo dagaal ahaayeen Ingiriiska. Xilliganina waxay ahayd markii koowaad ee la maqlay eragya “Soomaali-weyn”!
Markii koowaad ee dhulka Somaliland lagu weeraray diyaaradaha iyo hubka casriga ahi waxay ahayd bishii December ee sannadkii 1920, taasi oo ay dawladdii Ingiriisku ku bar-tilmaameedsanaysay Sayid Maxamed Cabdalle Xasan iyo ciidankiisii Daraawiishta.
Geeddi nololeedkii Yuusuf X. Aadam 15.7.1914 illaa 15.2.2005.
Geel-jire Aqoon-jire, Taariikhdii iyo halgankii Maxamuud Axmed Cali 1903 illaa 03.June.1983-kii.
Taariikhda Soomaaliyeed 2009.